Madaxweynaha Jubaland: federaal ma rabo, -Maxaa loo waayay madaxweyne goboleed kale oo qaata mowqifkaas? | Kismaayo24 News Agency
Madaxweynaha Jubaland: federaal ma rabo, -Maxaa loo waayay madaxweyne goboleed kale oo qaata mowqifkaas?
Saturday May 13, 2017 - 3:23 under Somali News by Tifaftiraha K24
Madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam waxuu shirka London ka sheegay inuusan aamin-saneyn nidamka federaalka. “Waxaa laga hadlaa madaxweynhayaal badan iyo maamulgoboleedyo, -anigu shakhsiyan ma aaminsani Federaalism” Intaa markuu yiri waxaa goobta is qabsaday sawaxan soo dhaweyn ah waxaana la ruxay calanka Somalia.
Ma aha markii ugu horeysay ee uu madaxweynaha Jubaland meel fagaara ah ka cadeeyo mowqifkiisa ku aadan nidaamka hadda dalka lagu maamulo ee federaalis-ka, hase ahaatee waxaa is weydiin mudan sababta ilaa iyo hadda loo waayay madaxweyne kale oo ka tirsan maamul goboleedada dalka oo arinkan ku taageera amaba madaxda dowladda federaalka? Laba umbay mid tahay in aragtidan u gaar tahay madaxweynaha Jubaland oo madaxda kale ku qanacsan yihiin nidaamka federaalka iyo inay jirto cid ay ka baqayaan oo markaas aanay muujin karin aragtidooda ku aadan nidaamka federaalka. Ciddaas ha noqoto shacabka deegaanada ay matlaan amaba quwado dibadda ah!!
Waxaa xusid mudan in Jubaland horay loogu tirinayay inay tahay gobolada ugu ad adag dhanka taageerada nidaamka fedraalka, waxaana la rumeysnaa in muranadii dhex maray dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland ku saleysnaayeen hirgelinta nidaamka federaalka oo la isku fahmi la’aa. ( Hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha Jubaland waxuu meesha ka saarayaa aragtidaas hore waxaana muuqata in Jubaland maanta tahay maamulka keliya ee u ol oleynaya in meesha laga saaro nidaamka federaalka isla markaana la helo dowlad dhexe iyo haddana lama hayo masuul ka tirsan dowlad goboleedada kale maba dowladda dhexe oo arinka ku taageera Jubaland.